Banyere Anyị - Luoyang esorowo Tungsten-Molybdenum Ihe Co., Ltd.
Esorowo TUNGSTEN MOLYBDENUM
MOLYBDENUM ụgbọ mmiri
MOLYBDENUM ọla kọpa Alloy
MOLYBDENUM ịkpọpu MANDREL
MOLYBDENUM ntụ ntụ
MOLYBDENUM mpempe akwụkwọ
Elu njupụta TUNGSTEN Alloy
TUNGSTEN ụgbọ mmiri
TUNGSTEN-ọla kọpa Alloy
TUNGSTEN ntụ ntụ
TANTALUM mpempe akwụkwọ
NIOBIUM ntụ ntụ
Industrylọ ọrụ ọkụ
Industrylọ ọrụ eletrọniki
Aviation Ma Defense
Tungsten Arọ alloys
Power Nkesa na nnyefe
Esorowo bụ ihe ọma mara emeputa maka refractory ọla ke China. Ruo afọ 20 'ahụmahụ na ihe karịrị 100 ngwaahịa merenụ, anyị zuru okè ịghọta omume na ike nke molybdenum, tungsten, tantalum, na niobium. Na Nchikota na ndị ọzọ dara na seramiiki ihe, anyị nwere ike imeghari Njirimara nke ọla kpomkwem gị kpọmkwem chọrọ. Anyị mgbe niile na-agbalịsi ike welie arụmọrụ nke anyị ihe ọbụna n'ihu. Anyị simulate omume nke ihe n'oge mmepụta na na ngwa, enyocha chemical na n'ụzọ anụ ahụ Filiks ma na-anwale anyị ubiere ke ihe ọnwụnwa mụụrụ na mmekota na anyị ahịa. Anyị na-ekere òkè collaborations na-eduga nnyocha institutes na mahadum na China.
Anyị na-na na-anapụta n'elu mma. Nke ahụ bụ isi ihe na nkà ihe ọmụma na-akọrọ site niile anyị ọrụ. Anyị àgwà otu emepụta ọnọdụ dị mkpa n'ihi na nke a na ndekọ na-arụpụta maka gị. Anyị ịghọta n'ụzọ zuru ezu anyị ọrụ kwupụta ahịa anyị, ọrụ na gburugburu ebe obibi.
Anyị na-enye gị na n'elu-àgwà ngwaahịa na-kpọmkwem na-emegharị maka ojiji na gị ngwa. Anyị hụ na nchekwa na ahụ ike nke anyị ọrụ. Anyị chebe gburugburu ebe obibi na-elezi anya n'ụzọ anyị na-eji ngwaọrụ na ume.
A ile anyị Plant
Anyị na-enyocha ọrụ:
1. Metallography: qualitative na quantitative nkọwa nke microstructure nke dara ihe, ojiji nke ìhè-ngwa anya Microscopy, ịgụ isiokwu elektrọn Microscopy, ike dispersive (EDX) na wavelength dispersive (WDX) X-ray nyochara.
2. Non-ebibi ule: Visual inspections, e ji esiji ákwà penetration ule, magnetik powder ule, ultrasonic ule, ultrasound Microscopy, leakage ule, Eddy ugbu a ule, radiographic na thermographic ule.
3. Mechanical na nkà na ụzụ ihe ule: ekweghị ekwe ule, ule nke ike na viscosity, ule nke ọkụ Njirimara ọnụ na nkà na ụzụ na mgbaji ọkpụkpụ arụzi ule usoro na okpomọkụ ruo n'elu 2 000 ° C.
4. Chemical analysis: Atọm spectrometry, gas analysis, chemical akparamagwa nke ntụ, X-ray usoro, ion chromatography na thermophysical gbasara nyocha ụzọ.
5. corrosion ule: n'Ule nke ikuku corrosion, udu mmiri corrosion, corrosion na agbazenụ ọkụ gas corrosion na electrochemical corrosion.
Nke ahụ abụghị nsogbu, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ya na nwa na-acha ọcha. Anyị quality management usoro nwere ISO 9001: 2015 certification.we nwekwara Standard maka Environmental Management ISO 14001: 2015 na Standard maka Occupational Health na Safety Management Bs OHSAS 18001: 2007.
CPL Kaiyuan Avenue Luolong District, Luoyang, China
Tzm efere , Tzm mpempe akwụkwọ , Molybdenum Rod , Molybdenum mpempe akwụkwọ, Molybdenum , Molybdenum efere,